Indlu yanamhlanje enomtsalane 800 m ukusuka elwandle.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKristina
Indlu epholileyo eyakhiwe ngo-2018. Ukuhamba okuzolileyo kunye noxolo unyaka wonke. Ubume bendalo obumangalisayo obunamawa, amahlathi kunye neembono eziphefumlayo zolwandle kwindawo yolondolozo lwendalo yaseStigfjorden. Kufuphi nendlu yethu kukho i-marina encinci eneendawo zokuhlamba kunye ne-trampoline. Iindlela ezintle zokuhamba kunye namahlathi ajikeleze indlu. Indlu yeyokuqala kwaye imnandi kakhulu, kubantu aba-6. Ukongeza, ikhabhathi ekhululekileyo eyedwa enebhedi ezi-2 ihamba nendlu enkulu. Itrampoline enkulu kunye neemoto ezi-2 zokupaka.
Ukhululekile ukusebenzisa indlu enkulu kunye nekhabhathi, ingca kunye nendawo yokupaka.
Yiza namaphepha akho kunye neetawuli. Kuyenzeka ukuba ufumane uncedo ngokucoca ixesha elininzi, 1000 skr, kodwa nceda ubuze ngexesha lokubhukisha! Ukucoca kuhlawulwa ngokwahlukeneyo kum hayi ngeli phepha lewebhu. Kungenjalo uyazicoca.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, 1 ibhedi elala abantu ababini, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, iibhedi ezikhweleneyo eziyi-2
Ichwebakazi laseBohuslän liyamangalisa. Indlu yethu ikwindawo eyingozi enamawa, amahlathi kunye nembonakalo entle yolwandle kwindawo yogcino lwendalo yaseStigfjorden. Indlu ikufuphi neendawo ezininzi zokutyelela, kodwa abakhenkethi abambalwa abafumana indlela yabo yokuya kwindawo ekufutshane. Iindlela ezintle zokuhamba kunye namahlathi ajikeleze indlu. Indlu ngandlel’ ithile ikhuselwe emoyeni yimithi neenduli.
Ndihlala eGothenburg kwaye ndiza kufumaneka kwisicatshulwa / ngefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tjörn N